छिटो र सजिलो फोटोशपमा एनिमेटेड GIF कसरी सिर्जना गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
कसरी सिर्जना गर्नुहोस् GIF एनिमेटेड फोटोहोp छिटो र सजिलैसँग अब कुनै समस्या छैन धन्यवाद Photoshop, Quintessential फोटो retouching उपकरण, तर के तपाइँ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्थ्यो थाहा छ GIF con Photoshop एकदम छिटो? केहि थोरैमा 10 मिनेट तपाईंको एनिमेसन को जटिलता मा निर्भर गर्दछ तपाईं एक शानदार सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ GIF द गो मा तपाईं जहाँ चाहानुहुन्छ प्रयोग गर्न। धेरै सहज र धेरै थोरै चरणहरूमा Photoshop हामीलाई अनुमति दिन्छ एकै साथ आन्दोलनको साथ काम गर्नुहोस् हामी फोटो रिचचिंग गर्दा।
केवल एक कि तिमीलाई चाहिन्छ एक गर्न GIF एनिमेटेड Photoshop es तपाइँ एनिमेसन कसरी बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने विचार प्राप्त गर्नुहोस् र एनिमेसन सिर्जना गर्न आवश्यक सबै छविहरू तैयार गर्नुहोस्। यस प्रकारको एनिमेसन। मा आधारित छ आन्दोलन सिर्जना गर्न फ्रेमहरू धेरै Adobe जस्तै सजीव Photoshop आन्दोलन सिर्जना गर्न सुरू गर्नको लागि फ्रेमहरू देख्न र लुक्नको लागि अनुमति दिन्छ। यस प्रकारको एनिमेसनमा, प्रत्येक फ्रेम एक आन्दोलन हो, त्यसैले हामीले प्रत्येक पटक आन्दोलन सिर्जना गर्न चाहेको तहहरूमा वस्तुहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ। सजिलो, छिटो र धेरै सहज।
यस अवस्थामा हामी एक गर्न जाँदैछौं GIF चम्किरहेको जहाँ आइकनले यसको दृश्यता वैकल्पिक गर्दछ, पछि हामी फन्ट पनि थप्नेछौं।
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको यसलाई बाहिर निकाल्नु हो एनिमेसन मेनू, यसको लागि हामी ट्याबमा जान्छौं विन्डो / समयरेखा de Photoshop। हामीले पहिले नै अन्य एडोब कार्यक्रमहरूमा टाइमलाइन देख्यौं: एनिमेशन, प्रीमियर, प्रभाव पछि र भिडियोहरू वा एनिमेसनहरू सम्पादन गर्ने सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू।
एकपटक हामीसँग हाम्रो समयरेखा तयार भएपछि, हामी के गर्न जाँदैछौं सुरू हो फ्रेमहरू सिर्जना गर्नुहोस्। प्रत्येक फ्रेम यदि हामी नजिकबाट हेर्छौं तब तलको समय काउन्टरको साथ आइकन छ, यो काउन्टरले उक्त फ्रेमको अवधि चिह्नित गर्दछ। एनिमेसन को विचार हो हाम्रो छविहरूको तह र ती फ्रेमहरूको अवधि बीच टगल गर्नुहोस्, प्रत्येक फ्रेम बाकस एक चाल हो (प्रतिमाको यस मामलामा एक जम्प) जब हामी आइकनको दृश्यता तह टगल गर्दछौं। छोटकरीमा, हामीले के गर्नुपर्‍यो एउटा फ्रेम टगल गर्नुहोस् आइकन र अर्को आइकन बिना, यस तरिकाले यो दृश्यात्मक देखिन्छ कि फ्ल्याश गर्दैछ।
यदि हामी माथिको छविमा हेर्छौं, हामी हेर्छौं कि कसरी हाम्रो आइकनको दृश्यता वैकल्पिक हुन्छ, यसैले यसलाई प्राप्त गर्दै फ्लिकर प्रभाव। टाइपोग्राफीको साथ पनि यस्तै हुन्छ, हामी यसको आन्दोलनलाई जुनसुकै तरिकाबाट वैकल्पिक बनाउन सक्छौं: आकार, रंग, आकार ... कुनै पनि सम्भावना सम्भव छ जबसम्म हामी प्रत्येक फ्रेमको बिचमा वैकल्पिक गर्दछौं।
El प्रत्येक फ्रेमको समय यो हामी हाम्रो को लागी खोजिरहेका छौं मा निर्भर गर्दछ GIFयदि हामी बढि गति चाहन्छौं भने हामी प्रत्येक फ्रेमलाई कम समय दिनेछौं, अर्कोतर्फ यदि हामी थोरै स्पीड चाहन्छौं भने हामी प्रत्येक फ्रेमलाई बढी समय दिनेछौं।
अन्तिम चरण समावेश गर्दछ हाम्रो निर्यात गर्नुहोस् GIF, यसको लागि हामी फाईल मेनूमा जान्छौं Photoshop र हामी वेब को लागी निर्यात गर्न विकल्प छान्छौं।
धेरै छोटो समयमा हामी एउटा सिर्जना गर्न सक्षम भएका छौं GIF एनिमेटेड प्रयोग गरेर Photoshop, डिजाइन र फोटोग्राफी मन पराउने सबैको लागि हाम्रो मनपर्ने उपकरण। सम्झनुहोस् कि केहि पनि सिर्जना गर्न मात्र सीमितता हाम्रो आफ्नै कल्पना हो। सबै प्रकारका सिर्जना गर्नुहोस् GIF र बिना रोकिरहेको अभ्यास गर्नुहोस् तपाइँ प्राविधिक मा राम्रा मास्टर नगरेसम्म।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » छिटो र सजिलो फोटोशपमा एनिमेटेड GIF कसरी सिर्जना गर्ने
मारिया सोल नीटो भन्यो
जुलियो एडुआर्डो त उनीहरूले पछि मसँग कुरा गर्ने छैनन्! : D
मारिया सोल निटोलाई जवाफ दिनुहोस्
एडोब क्रियटिभको लागि सबैभन्दा ठूलो सामाजिक नेटवर्कमा उत्कृष्ट कार्य गर्नुहोस्